Isizathu Sokuba Kube Nzima Ukwenza Okulungileyo—Into Ekufuneka Bayazi Abantwana
XA USAWULE wayesenza izinto ezimbi, ngubani owayevuya?— NguSathana uMtyholi. Kodwa zazivuya nazo iinkokeli zonqulo lwamaYuda. Ngoko xa uSawule waba ngumfundi woMfundisi Omkhulu waza wabizwa ngokuba nguPawulos, ezo nkokeli zonqulo zamthiya. Ngoko ngaba uyasiqonda isizathu sokuba kube nzima kumfundi kaYesu ukwenza okulungileyo?—
Ziziphi izinto ezibuhlungu ezamehlelayo uPawulos xa wenza okulungileyo?
Umbingeleli omkhulu ogama linguAnaniyas wakha wayalela ukuba uPawulos abethwe ngenqindi. UAnaniyas wada wazama ukuba uPawulos afakwe entolongweni. UPawulos wehlelwa zizinto ezininzi ezibuhlungu xa waba ngumfundi kaYesu. Ngokomzekelo, abantu abangendawo bambetha uPawulos baza bazama nokumbulala ngamatye amakhulu.​—IZenzo 23:1, 2; 2 Korinte 11:24, 25.
Abantu abaninzi baya kuzama ukusiphembelela ukuba senze izinto ezingamkholisiyo uThixo. Ngoko imibuzo ephakamayo yile, Ukuthanda kangakanani oko kulungileyo? Ngaba ukuthanda kangangokuba uya kuqhubeka ukwenza nokuba abanye bayakuthiya ngenxa yoko? Kufuneka ube nenkalipho ukuze wenjenjalo, andithi?—
Kusenokwenzeka ukuba uyazibuza, ‘Yintoni eya kubangela ukuba abantu basithiye xa sisenza okulungileyo? Bebengafanele bavuyiswe na koko?’ Usenokucinga njalo. Ngokuqhelekileyo abantu babemthanda uYesu ngenxa yezinto ezilungileyo awayezenza. Ngesinye isihlandlo, bonke abantu besixeko baya kwindlu awayehlala kuyo. Beza ngenxa yokuba uYesu wayephilisa abantu abagulayo.—Marko 1:33.
Kodwa abantu babengasoloko bekuthanda oko uYesu wayekufundisa. Nangona wayesoloko efundisa inyaniso, abanye bamthiya ngenxa yoko. Oku kwenzeka ngenye imini eNazarete, isixeko awayekhulele kuso uYesu. Waya kwindlu yesikhungu, apho ayehlanganisana khona amaYuda ukuze anqule uThixo.
Apho uYesu wanikela intetho emnandi esekelwe eZibhalweni. Abantu bayithanda ekuqaleni. Bamangaliswa ngamazwi amnandi awayephuma emlonyeni wakhe. Kwakunzima ukukholelwa ukuba wayengulaa mfana wakhulela kwisixeko sabo.
Kodwa uYesu wathetha enye into. Wathetha ngezihlandlo apho uThixo wabonisa uthando ngendlela ekhethekileyo kubantu ababengengawo amaYuda. Wathi akuthetha oko uYesu, abo bakwindlu yesikhungu baba nomsindo. Ngaba uyasazi isizathu soko?— Babecinga ukuba ngabo kuphela abathandwa ngokukhethekileyo nguThixo. Babecinga ukuba babhetele kunabanye abantu. Ngoko bamthiya uYesu ngenxa yoko wakuthethayo. Ngaba uyazi ukuba yintoni ababefuna ukumenza yona?—
IBhayibhile ithi: ‘Bambamba uYesu baza bamkhuphela ngaphandle kwesixeko. Baya naye eliweni befuna ukumphosa apho ukuze bambulale! Kodwa uYesu waphuncula wabaleka.’​—Luka 4:16-30.
Kutheni aba bantu bezama ukubulala uYesu?
Ukuba oko kwakwenzeke kuwe, ngaba wawuya kuphinda uye kuthetha nabo bantu ngoThixo?— Oko kwakuya kufuna inkalipho, akunjalo?— Noko ke, emva konyaka, uYesu wabuyela eNazarete. IBhayibhile ithi: “Wabafundisa endlwini yabo yesikhungu.” UYesu akazange ayeke ukuthetha inyaniso ngenxa yokoyika abantu ababengamthandi uThixo.—Mateyu 13:54.
Ngenye imini, ngesabatha, uYesu wayekwindawo ekwakukho kuyo umntu onesandla esomileyo. UYesu wayenamandla avela kuThixo okumphilisa loo mntu. Kodwa abanye ababelapho bafuna ukumfaka engxakini uYesu. Wayeza kuthini uMfundisi Omkhulu?— Okokuqala wabuza wathi: ‘Ukuba ubunemvu ize yeyele emngxunyeni omkhulu ngeSabatha, ngaba ubuya kuyikhupha?’
Ewe, babeya kuyikhupha loo mvu, nokuba kungeSabatha, usuku ababefanele baphumle ngalo. Ngoko uYesu wathi: ‘Kubaluleke ngakumbi ukunceda umntu ngeSabatha, ekubeni umntu exabiseke ngaphezu kwemvu!’ Hayi indlela ekucace ngayo ukuba uYesu wayefanele amncede lo mntu ngokumphilisa!
UYesu wamxelela loo mntu ukuba olule isandla sakhe. Ngoko nangoko saphila. Hayi indlela awavuya ngayo loo mntu! Kodwa babevakalelwa njani bona abanye abantu? Ngaba bona bavuya?— Akunjalo. Bamthiya ngakumbi uYesu. Bahamba baya kuzama amacebo okumbulala!—Mateyu 12:9-14.
Kusenjalo nanamhlanje. Kungakhathaliseki ukuba yintoni esiyenzayo, asinakuze sibakholise bonke abantu. Ngoko simele sikhethe ukuba ngubani ngokwenene esifuna ukumkholisa. Ngoko ukuba nguYehova uThixo noNyana wakhe, uYesu Kristu, simele senze oko bakufundisayo ngalo lonke ixesha. Kodwa ukuba senjenjalo, ngubani oya kusithiya? Ngubani oya kwenza kube nzima ukuba senze okulungileyo?—
NguSathana uMtyholi. Kodwa ngoobani abanye?— Ngabo bakhohliswe nguMtyholi ukuba bakholelwe izinto ezimbi. UYesu wathi kwiinkokeli zonqulo zomhla wakhe: “Nina niphuma kuyihlo uMtyholi, yaye nithanda ukwenza ngokweminqweno kayihlo.”—Yohane 8:44.
Kukho abantu abaninzi abathandayo uMtyholi. UYesu ubabiza ngokuba ‘lihlabathi.’ Ucinga ukuba liliphi “ihlabathi” athetha ngalo uYesu?— Makhe sibone kuYohane isahluko 15, indinyana 19. Apho sifunda amazwi kaYesu athi: “Ukuba beniyinxalenye yehlabathi, ihlabathi beliya kukuthanda oko kukokwalo. Ke ngenxa yokuba ningeyonxalenye yehlabathi, kodwa ndininyulile mna naphuma kulo ihlabathi, ngenxa yoko linithiyile ihlabathi.”
Ngoko elo hlabathi libathiyileyo abafundi bakaYesu ngabo bonke abantu abangengabo abalandeli bakhe. Kutheni ihlabathi libathiyile nje abafundi bakaYesu?— Khawukhe ucinge ngoku. Ngubani umlawuli wehlabathi?— IBhayibhile ithi: “Ihlabathi liphela lisemandleni ongendawo.” Lowo ungendawo nguSathana uMtyholi.​—1 Yohane 5:19.
Ngaba uyasiqonda ke ngoku isizathu sokuba kube nzima ukwenza okulungileyo?— NguSathana nehlabathi lakhe ababangela kube nzima. Kodwa sikho nesinye isizathu. Ngaba usasikhumbula?— KwiSahluko 23 sale ncwadi, siye safunda ukuba sonke sizalelwe esonweni. Ngaba akuyi kuba yinto evuyisayo xa isono, uMtyholi, nehlabathi lakhe bengasekho?—
Xa eli hlabathi lidlula, kuya kwenzeka ntoni kwabo benza okulungileyo?
IBhayibhile ithembisa oku: “Ihlabathi liyadlula.” Oku kuthetha ukuba bonke abo bangengabo abalandeli boMfundisi Omkhulu abayi kuphinda babekho. Abayi kuvunyelwa ukuba baphile ngonaphakade. Ngaba uyazi ukuba ngoobani abaya kuphila ngonaphakade?— IBhayibhile yongezelela ithi: “Lowo wenza ukuthanda kukaThixo uhleli ngonaphakade.” (1 Yohane 2:17) Ewe, kuphela ngabo benza okulungileyo, abo benza “ukuthanda kukaThixo,” abaya kuphila ngonaphakade kwihlabathi elitsha likaThixo. Ngoko nokuba kunzima kangakanani na, siyafuna ukwenza okulungileyo, akunjalo?—
Masifunde kunye ezi zibhalo zibonisa isizathu sokuba kungekho lula ukwenza okulungileyo: UMateyu 7:13, 14; uLuka 13:23, 24 neZenzo 14:21, 22.